Budata DroidKit maka Windows
Free Budata maka Windows (8.70 MB)
Ihichapụ foto na ozi, ichefu paswọọdụ ihuenyo mkpọchi, ma ọ bụ ekwentị anaghị arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụ bụrụ nke a na -agaghị ahụ anya mgbe emelite ngwanrọ… Nsogbu nwere ike ime anyị niile. Ngwọta nsogbu ngwanrọ nke a na -ahụkarị anaghị esiri ike dịka i chere. Utilities dị ka DroidKit, nke a wdg. na -eme ka ọ dị mfe idozi nsogbu.
DroidKit bụ mmemme ngwugwu na -edozi nsogbu nkịtị na ekwentị gam akporo.
Ị gaghị echegbu onwe gị mgbe data dị mkpa dị ka nkata WhatsApp, ozi, foto na vidiyo furu efu. Site na mmemme iMobie a, ị nwere ike iweghachi data furu efu/ehichapụ na ọ dịghị mkpa ka ịgbanye ngwaọrụ gị. Ihe kacha njọ nwere ike ime ọzọ karịa ihichapụ data bụ ichefu paswọọdụ ihuenyo mkpọchi. Nọnọdụ ụfọdụ, anyị nwere ike chefuo paswọọdụ PIN dị mfe. Na agbanyeghị usoro nchekwa etinyere na mmemme a, ị nwere ike wepu mkpọchi ihuenyo. Nagbanyeghị otu ị siri chedo ekwentị gị, ma ọ bụ PIN, okwuntughe, ụkpụrụ, akara mkpisi aka ma ọ bụ ngosi ihu, mmemme a ga -enyere gị aka imepe ihuenyo gị nke ọma. Nsogbu ọzọ dị mkpa dịka okwuntughe mkpọchi ihuenyo bụ mkpọchi FRP. Ọ bụrụ na ịzụtara ekwentị nke abụọ, ọ nwere ike ị ga-ezute mkpọchi FRP.Onye nwe ngwaọrụ nwere ike ọ gaghị agbanyụ njirimara a na -echebe data mgbe nrụgharị ụlọ nrụpụta gachara. Ọ bụrụ na ọ chetaghị ozi akaụntụ, ngwaọrụ ahụ agaghị adị irè. Site na DroidKit, ị nwere ike ịgafe mkpọchi FRP ozugbo na ngwa ngwa.
Site na DroidKit, ị nwekwara ike idozi nsogbu metụtara OS OS na -enweghị mgbọrọgwụ. Ihuenyo ojii, kefriza, ihuenyo mmetụ anaghị arụ ọrụ, ngwa na -akụda/mechie, igwefoto na -akụda… Nagbanyeghị nsogbu gam akporo ị na -enwe, DroidKit na -edozi nsogbu ahụ na -enweghị ịgbanye ngwaọrụ gị.
I nwekwara ike iji mmemme a melite/wụnye ngwanrọ ekwentị gam akporo gị. Dị ka ọ na -adịkarị, ị ga -achọ ROM kwesịrị ekwesị maka ekwentị gị, chọta ngwa ọkụ wee gafee usoro ọrụ aka. DroidKit na -achọta ROM emelitere na -akpaghị aka maka ngwaọrụ gị ma ị nwere ike imelite ngwaọrụ gị na ụdị gam akporo nke ịchọrọ na ọpịpị.
Ọ bụghị naanị ndị a; Ị nwekwara ike iji mmemme ahụ ịtọhapụ oghere na ime ngwa ekwentị gam akporo gị. Ọ na -achọpụta ma kekọta faịlụ cache, ngwa ndabere, faịlụ APK na faịlụ buru ibu na ekwentị gị. Ị nwere ike ịlele faịlụ nke ọma wee hichapụ ihe niile ma ọ bụ naanị ndị ị chọghị site na ịpị otu. Enweghị ihe ize ndụ nke ihichapụ faịlụ sistemụ na mberede, na -akpata mkpọka ngwa ma ọ bụ ọbụna mkpọka gam akporo. Ị na -enweta ekwentị ngwa ngwa yana nchekwa zuru oke maka foto ma ọ bụ ngwa ọhụrụ.
Naghachi foto furu efu/ehichapụ, nkata WhatsApp, ozi na ihe ndị ọzọ na -enweghị mgbọrọgwụ.
Wepu ihuenyo mkpọchi na ekwentị gam akporo wee gafee mkpọchi Samsung FRP.
Idozi nsogbu sistemụ wee degharịa/kwalite sistemụ arụmọrụ maka ekwentị Samsung na mbadamba.
Jikọọ sistemụ junk na faịlụ na -enweghị isi na otu mgbata iji mee ka ekwentị gị dị ngwa.
Enweghị nka achọrọ. Naghachi na data na ekwentị gị nime nkeji site na iji ọpịpị dị mfe.
Nha faịlụ: 8.70 MB
Mmepụta: iMobie Inc.